गोकुल बास्कोटाले गरे प्रचण्ड सक्किने घोषणा, के हो कारण? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/गोकुल बास्कोटाले गरे प्रचण्ड सक्किने घोषणा, के हो कारण?
काठमाडौं– सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माथि राजिनामाको दबाब बढेको छ। यही अवस्थामा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । पार्टी एकीकरण भएको दुई वर्ष नाघेपछि नेकपा फुटको संघारमा उभिएको छ ।
जनमत विपरीत र अनावश्यक राजनीतिक खेलले ओलीलाई सिध्याउँदा प्रचण्ड पनि नजोगिने नेकपाका नेता तथा पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए ।एउटै पार्टीका एक अध्यक्ष ओलीलाई राजनीतिक असर गर्दा त्यसको प्रभाव प्रचण्डलाई पनि पर्ने उनको भनाइ छ ।
मुलुकको राजनीतिक, समसामयिक विषय तथा उनीमाथि लागेको आरोपका विषयमा उनले मुलुकको आवश्यकता र जनताका हितका लागि सरकारले काम गरेको दाबी गरेका छन् । आफ्नै पार्टीका नेताले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्दा सिङ्गो पार्टीबारे जनतामा गलत सन्देश जाने भएकाले सचेत रहनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौँमा अस्पताल गएकाहरुमा देखियो कोरोना, अस्पताल जाँदा हुन्छ यस्तो जोखिम, के अस्पतालबाट समुदायमा फैलिएको हो कोरोना ?